मान्छे खस्ने भीरमा गाडी सरर
अप्रिल २०, २००८
कतिपय मानिसलाई पैतिस सय मिटर उक्लनपनि धौधौ पर्छ। तर कुनैबेला हाम्रो इण्डोचीन क्षेत्रका चार हजार दुई सय मिटर अग्ला हिमालमाथी चार पाङ्ग्रे बिशाल गाडी कुदिसकेका रहेछन भन्ने सुन्दा कसरि पत्याउने ? हो, सन् १९३१ मा फ्रान्सको सिथ्रोइयाँ...
हराएका डाइनोसरहरु पेरिसमा भेटिए
चराका पूर्खा डाइनोसर। पेरिसको ग्रं पालेमा राखिएको डाइनोसरको एक जाति। ...
कालो झन्डा देखाउदाका दृष्यहरु
हाम्रा राजाबाट भाषण गर्दा सधै पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् भन्ने बाक्य प्रयोग गरिन्छ। पशुपतिनाथको अर्थ पशुकापति। त्यसैले हिजोपनि राजाको उक्त बाक्यलाई शिरोधार्य गर्दै पशुकापति बनाइयो । पशुकापतिले नै राजा र राजपरिवारका सदस्यको रक्षा गर्छन् र पशुपतीलाई राजपरिवारले खुव...
मैले नाचेको तपाइको मंजुश्री नाच कस्तो छ ? मंजुश्री नाचमा फ्रान्सेली कलाकार मंजुश्री बितेका दुइ दिन पेरिसमा नेपाल महोत्सव थियो । हरेक बर्ष गर्मी महिनामा यहाका नेपालीहरु यस्तै महोत्सवको आयोजना गरेर नेपालको संस्कृतिको छनक दिन्छन्।...
फ्रान्ससम्म जोडियो माओवादी सडक
अप्रिल ४, २००७
माओवादीहरुले रुकुमको थवाङसम्म पुर्याउन लागेको एक सय किलोमिटर लामो सडक खन्दै गर्दाको चित्रण हो यो । ला रुत दे मार्ती अर्थात शहिदको बाटो भन्दै माओवादी सडकलाई बिद्रोहीहरुको विकासलाई नेपालमा माओ फर्के भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो चित्रण...
अप्रिल ३, २००७
पशुपन्छी भनेका मानिसको स्वार्थ र उपयोगकालागि मात्रै हुन ? के यिनमा सम्बेदना, माया र ममता भन्ने हुँदैन? धारिलो हतियारले अड्कलीअड्कली हानेर हत्या गर्दा के यिनलाई पिडा नहोला ? आफ्नो परिवार र बालबच्चाको माया यिनमा नहोला ? आफन्तको...